Icon "Ilay Mpamonjy tsy natao tanana" - ny tantaran'ny fiandohana, izay nanoratra, vavaka, nanavotra an'i Akathist
Esoterica Vavaka sy sary
Ny sary hoe "Ilay Mpamonjy tsy nanao tanana" - avy amin'ny inona no miaro, inona no manampy?
Tena tsara ho an'ny mpino ny sary hoe "Ilay Mpamonjy tsy manao tanana" - iray amin'ireo sary ortodoksa voalohany, izay ahitana ny endrik'i Kristy. Ny dikan'izany sary izany dia mitovy amin'ny fanomboana. Misy lisitra maro napetraky ny mpanoratra malaza.
"Tsy nataon'ny Mpamonjy ny Mpamonjy" - tantaran'ny fiandohana
Olona maro no nanontany tena hoe aiza no misy ny endriky ny endrik'i Kristy, raha tsy misy resaka momba izany ao amin'ny Baiboly, ary ny fanomezana ny fiangonana dia mitahiry ny filazalazana faran'izay kely indrindra? Ny tantaran'ny kisarisary "Ilay Mpamonjy tsy manao tanana" dia manondro fa ny tsipiriany momba ilay olona dia nahaliana an'i Eusèbe, mpahay tantara romanina. Ny governora tao an-tanànan'i Edessa, Avgar, dia narary mafy ary naniraka mpanakanto iray hanoratra ny sariny i Kristy. Tsy afaka niatrika ilay asa izy, satria nanajamba ny fahavoazana masina.
Dia nalain'i Jesosy ny lambam-pandriana, ka nofafany ny tarehiny. Nisy fahagagana nitranga teto - nafindra tamin'ity raharaha ity ny endriky ny tarehiny. Ny sary dia nantsoina hoe "tsy nataon-tànana", satria tsy noforonin'ny tanan'olombelona izany. Izany no nahatonga ilay sary famantarana antsoina hoe "Ilay Mpamonjy tsy nataon-tànana". Noraisin'ilay mpanakanto ilay lamba tamin'ny tarehiny, ary noraisiny tamin'ny tanany izany. Nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nanao fahagagana maro ny sary ary manohy io asa io hatramin'izao.
Iza no nanoratra hoe "Ilay Mpamonjy tsy nataon-tànana"?
Ny lisitr'ireo sary famantarana voalohany dia nanomboka niseho tsy tapaka taorian'ny nanorenana ny Kristianisma tany Rosia. Heverina fa ireo kopian'ny Byzantinina sy Grika ireo. Ny icon "Ilay Mpamonjy tsy nataon-tànana", ilay mpanoratra azy no ilay Mpamonjy tenany, dia notanan 'i King Avgar, ary ny famaritana azy dia tonga taminay tamin'ny alalan'ny antontan-taratasy. Misy tsipiriany manan-danja maromaro izay tokony handinihanao ny fotoana hijerena ny sarinao:
Ny toe-javatra misy ny fanamafisana dia natsangana teo amin'ny hazo hazo ary io sary io no hany sarin'i Jesoa amin'ny maha-olombelona azy. Ao amin'ny sary hafa, i Kristy dia misolo tena na misy toetra sasany, na manao zavatra sasany.
Ny endriky ny "Mpamonjy tsy manao tanana" dia tsy maintsy mandalina amin'ny sekolin'ny sary hosodoko. Ankoatr'izany dia tsy maintsy manao ny lisitra izy ireo ho toy ny asa mahaleo tena voalohany.
Ireny olo-malaza io ihany no ahafantarana an'i Jesosy miaraka amin'ny karazam-borona iray, izay mariky ny firindrana ary manondro ny fahatanterahan'izao tontolo izao.
Ny filalaovana iray hafa manan-danja amin'ilay sarimihetsika "Ilay Mpamonjy tsy manao tanana" - ny endrik'ilay Mpamonjy dia aseho amin'ny endrika mitovitovy, saingy ny masony ihany no mihodina eo amin'ny lafiny, izay mahatonga ny sary ho velona. Tsy mitovy ny sary fa tsy hoe manondro ny sinton'ny zavatra rehetra noforonin'Andriamanitra.
Ny endriky ny Mpamonjy dia tsy maneho fanaintainana na fijaliana. Raha mijery ny sary ianao dia hahita fiadanana , fandanjana ary fahalalahana amin'ny fihetseham-po rehetra. Mpino maro no mihevitra azy ho fanehoana "hatsarana madio."
Ny sarimihetsika dia mampiseho fihomehezana, saingy ireo sary dia maneho ny loha, fa koa ny soroka, saingy eto izy ireo tsy eo. Ity tsipiriany ity dia amin'ny fomba samihafa no andikana azy, noho izany dia heverina fa ny lohan'olona dia manondro ny maha-voalohany ny fanahy amin'ny vatana, ary manaporofo koa fa ny zava-dehibe indrindra amin'ny fiangonana dia i Kristy.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny tarehimarika dia aseho eo amin'ny fiavian'ny karazana lamba amin'ny karazana vala. Misy safidy rehefa aseho amin'ny rindrina biriky ny sary. Ao amin'ny fomban-drazana sasany dia mitoetra eo amin'ny elatry ny anjely ny lakandrano.
"Ilay Mpamonjy tsy natao tanana" Andrey Rublev
Mpanakanto fanta-daza iray no nampiseho sary maromaro ho an'izao tontolo izao ary nanana lanjany lehibe ho azy ny sarin'i Jesoa Kristy. Ny mpanoratra dia manana ny endriny mora fantarina, ohatra, ny fiovan'ny aloky ny hazavana ao anaty alokaloka, izay mifanohitra tanteraka amin'ny fifanandrinana. Ny sary hoe "Ilay Mpamonjy Tsy Nataon'ny Tanàna", nosoratan'i Andrei Rublev, dia nanantitrantitra ny maha-maivana ny fanahin'i Kristy, izay nampiasana ny hafanana mangatsiatsiaka. Noho izany, ny loko dia antsoina hoe "luminiferous". Ny sary asehon'ny artista dia mifanohitra amin'ny fomban'i Byzantine.
"Ilay Mpamonjy tsy natao tanana" Simon Ushakov
Tamin'ny taona 1658, ilay artista dia namorona ny asa malaza indrindra - ny endrik'i Jesosy "Ilay Mpamonjy tsy nataon-tànana". Nosoratana ho an'ny monastera ny icon, hita ao Sergiev Posad. Izy io dia manana habe kely - 53x42 cm. Ny sary famantarana an'i Simon Ushakov "Ilay Mpamonjy tsy nanao tanana" dia nosoratana tamin'ny hazo nampiasana ny tempera ary ny mpanoratra dia nampiasaina tamin'ny fanoratana teknika ara-javakanto ho an'io fotoana io. Ny sary dia nasongadina amin'ny sary manonta feno ny endriky ny endriky ny tarehimarika sy ny famindrana mainty mainty.
Inona no manampy ny kisarisary "Ilay Mpamonjy tsy nataon-tànana"?
Ny sarin'i Jesoa Kristy dia mety ho lasa mpiaro mahatoky eo amin'ny olona, ​​fa noho izany dia ilaina ny mametraka fifanakalozan-kevitra amin'ny vavaka miaraka aminy. Raha liana ianao amin'ny zavatra miaro ny "Mpamonjy tsy manao tanana" icon, dia ilaina ny mahafantatra fa miaro amin'ny aretina maro sy ny voka-dratsy isan-karazany mikendry ny olona avy any ivelany. Ankoatra izany, mivavaka alohan'ny sary dia ny mamonjy ny fanahy, ho an'ny olona akaiky sy ny ankizy. Ny fitarainana amim-panajana dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fahatsarana, hahita asa sy hiatrehana ireo raharaha isan-karazany.
Vavaka "Hovonjeko ny tarehy masina"
Azonao atao ny manondro ny sary amin'ny teninao manokana, ny zavatra manan-danja indrindra dia ny manao izany amin'ny fo madio. Ny vavaka tsotra izay fantatry ny mpino rehetra dia ny "Rainay". Nomena ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy izy nandritra ny fiainany teto an-tany. Misy vavaka hafa tsotra, "Mamonjy ny Mpamonjy aho", ny lahatsoratra ambarany etsy ambany. Vakio isan'andro izy amin'ny fotoana ilain'ny fo.
Akatista "Hamonjy ny Toko Masina Aho"
Hira fiderana na mpiangaly, toy ny vavaka ampiasaina mba hiverin-dàlana mankany amin'ny Hery ambony kokoa ho fanampiana. Azo vakina tsy miankina ao an-trano izany. Ny Akathist "Save the Face Holy", ny lahatsoratra izay azo henoina fotsiny, dia manampy amin'ny fanesorana ireo eritreritra ratsy, hahazo fanohanana tsy hita maso ary mino ny tenanao. Tsarovy fa ny fihirana dia tsy maintsy mitsangana, afa-tsy amin'ny tranga manokana (rehefa misy olana amin'ny fahasalamana).
Inona no manampy ny archistratigus Michael?
Iza ilay arkanjely?
Vavaka maraina ho an'ny mpangataka
Vavaka maraina - ny herin'ny vavaka ortodokan'ny maraina
Avril Lavigne fomba
Crimea, Bakhchisaray - toerana fitsangantsanganana
Lindsay Lohan nanambara tamin'ny reniny fa tsy bevohoka izy
Ny aretina azo avy amin'ny paompy - soritr'aretina
Ny lakandrano mihetsiketsika - ny fitsipika mandritra ny fitondrana vohoka
Fanoratana ny visa ho an'i Shina
Ahoana ny fomba hanadiovana ny fantsom-bozaka vita amin'ny vy?
Famaritana ny fihenam-bidy amin'ny lohalika
Ahoana ny fomba hanesorana ratra amin'ny girika?
Vitabact ho an'ny zaza vao teraka
Carbuncle - fitsaboana